Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ubugcisa baseAsia butshisa imarike yehlabathi
Ngo-20: 00 ngomhla we-18 kaNovemba, ikopi eqingqiweyo ye-Integrated Digital Art (IDA) ikopi ye-Detailed Portrait of Rivers and Mountains nguFu Baoshi (1: 1) yanikezelwa kwifandesi nguRongbaozhai waseChina, enembali ye-350 iminyaka kwaye Izindlu zisebenza kwiimpucuko ezine zamandulo. I-IDA ikhutshwe nge-IP.PUB, i-affiliate ye-Seud Technology. Ifandesi yasingathwa ngumsebenzisi I-EASTIP ku-OpenSea, elona qonga likhulu lokurhweba ngobugcisa bedijithali ehlabathini.
I-IDA inguqulelo ye-Detailed Portrait of Rivers and Mountains imele umzobo obalaseleyo we-landscape, obrashi yayo kunye nemibala ikwisitayile semveli saseTshayina, kodwa ukubunjwa kwayo kunye nokwabiwa kombala kubhekiselele kwezo zemizobo yeoli yaseNtshona. Ixabiso layo eliphezulu lobugcisa libangele imfazwe yebhidi kwifandesi ye-OpenSea, kunye nomnye umzobo kaFu Baoshi othengiselwe i-CNY 187 yezigidi kwifandesi ngoJuni ka-2017.
Emva kweeyure ezimbini zokubhida okuqatha, IDA# 800002 # 00001, DetUmfanekiso wemilambo kunye neeNtaba ekugqibeleni yaphumelela ngumsebenzisi, ngexabiso le-USD $13785.53. Eli yayilixesha lokuqala isiqwenga sobugcisa bemveli baseTshayina bangena kwimarike yehlabathi ngokudityaniswa nobuchwepheshe be-blockchain, kwaye yabonelela ngendlela entsha yokuba ihlabathi libone ubugcisa baseMpuma, kwaye live ilizwi laseTshayina.
I-IDA ipapashwe phantsi kwenkqubo yokubhalisa igama langempela kwiwebhusayithi ye-IP.PUB, esekelwe kwi-Wenchang Chain ye-BSN Open Consortium Blockchain, ehambelana nemimiselo yaseTshayina. Ngokwahlulwa kwengqokelela yobugcisa bomzimba kwizatifikethi zobunini bedijithali, zonke iinkcukacha zobunini bedijithali ze-IDA kunye nokuhamba kwenkqubo kunokulandelelwa ngokucacileyo kwaye kuqinisekiswe ngokuchanekileyo.
Xa izatifikethi zobunini zedijithali ze-IDA zithengiswa kwihlabathi jikelele, zithunyelwa ukusuka e-Wenchang ukuya e-Ethereum ngokusebenzisa i-teknoloji ye-cross-chain IRIS Hub (aka IRISnet). I-Ethereum ke idibanisa ne-OpenSea kunye nolunye utshintshiselwano lwehlabathi olunokuxhasa iimfuno zokuthotyelwa kweendawo ezahlukeneyo zomthetho. Oku kubonelela imarike yehlabathi ngolawulo-friendly ubugcisa obuthembekileyo baseMpuma, obunemvelaphi elandelekayo.
I-EASTIP iya kusebenzisa i-OpenSea ukusungula ii-IDA zeminye imisebenzi yobugcisa eyaziwayo yaseMpuma, efana neQi Baishi's Pattra Leaves Insect Painting kunye neLi Keran's Fisherman's Song kuMlambo ocacileyo. Hlala ubukele ukuze ubone ukuba le misebenzi ibalulekileyo ngokwenkcubeko ukusuka kwenye yempucuko emine yamandulo iya kukhanya ngemibala emitsha emva kokudityaniswa kwe-NFT kunye ne-IDA ubuchwepheshe!